किन ४० वर्ष कटेपछि विवाहेत्तर स’म्बन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / किन ४० वर्ष कटेपछि विवाहेत्तर स’म्बन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ?
किन ४० वर्ष कटेपछि विवाहेत्तर स’म्बन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ?
admin November 18, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 105 Views
एजेन्सी । भनिन्छ जीवनमा एकपटकमात्रै विवाह गरिन्छ । विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ । वैवाहिक सम्ब’न्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन सं’सारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।
तर आ’धुनिक समाजमा विवाहको परिभाषा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । विवा’हेत्तर सम्बन्धले धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरु आक्रान्त भएका छन् । वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहन’सहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान–श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको क’दर नगर्ने जस्ता सम’स्याले अन्ततः कतिप’यको सम्बन्ध विच्छेद पनि भए’को छ ।
विवाहवेत्तर सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भए’तापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महि’लाको ठूलो संख्या वि’वाहेत्तर सम्बन्धमा रहन्छन् । अध्ययनले बताएअनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध का’रणहरु छन् ।
पतिको स्वभा’वमा आएको परिवर्तन
विवाहपछि पुरुषको काँधमा जिम्मेवारीको बोझ थपिन्छ । श्रीमती र छो’राछोरीको जिम्मेवारी उ’ठाउने क्रममा पुरुषहरु श्रीमतीलाई वेवास्ता गर्न पुग्छन् । र जिम्मेवारी सँगसँगै रोमान्स र सम’य दुवैमा कमी आउँछ जसको कारण महिला दोसु्रो पुरुषसँग आर्कषित हुन्छन् ।
सानो उमेरमा वि’वाह
सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका महिलाहरु विवाहपछि उनीहरु अनेक सामाजिक बन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसका कारण उनीहरु जीवन अर्कै मोडमा आइपुगेको र आफ्नो जीन्दगीमा अमूल्य समय खेर गएको अनुभव गर्छन् । जसको कारण उनीहरु विवा’हेत्तर सम्बन्धतर्फ उद्धत हुन्छन् ।
महिलाहरु अग्लो कद, हृष्टपुष्ठ शरीर र चम्किलो अनु’हार भएको पुरुषसँग छिट्टै आर्कषित हुने भएकाले आफ्नो पार्टनरमा भएको खुबीको वेवास्ता गर्छन् भने दोस्रो पुरुषको सानो सानो कुरामै आर्क’षित भइहाल्छन् ।
यौ’ ‘न असन्तुष्टी
४० वर्षपछि महिलाहरुले आफ्ना पार्टनरबाट यौुन सन्तुष्टी नपाउने भएकाले दो’स्रो पुरुषतर्फ आर्कषित हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
विवाहपछि आउने अनेक समस्या र परिवर्तन पछि महि’लाहरुमा बच्चा भइसकेपछि झनै धेरै परिपक्कता आइसक्छ । तर आफ्ना पतिप्रतिको विश्वास भने कम हुँदै जान्छ ।
उनीहरु बच्चा भइसकेपछि पतिले आफूलाई वेवा’स्ता गर्छ भन्ने सोच्छन् र बाहिर साथी बनाउन तिर लाग्छन् । घरायसी समस्या- यदि घरमा सधैँ झगडा, अशान्ती हुन्छ भने महिलाहरु अक्सर बा’हिर सम्बन्धको विकल्प रोज्छन् ।
Previous साउदी अरबमा अबदे’खि खुला भयो यी कुरा, के अरु देश जस्तै खुल्लाा भएको हो ?
Next सर्वोच्चमा अनौठो दृष्य : रातो कारमा एक दर्जन युवा आए, बारमा छि’रेर अमेरिकन ‘इगल’ भन्दै वकिलहरुसँग फा’इट गरेर गए